qasabad musqusha kabaal hal bir ah niiko niiko
qiimeeyay 5.00 out of 5 ku salaysan 18 ratings macaamiisha
SKU: 2321501 Categories: Qubeyska Musqusha, Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya Tags: 1 Qabashada, 1 Hood, tubada qubeyska
Qasabad aad u qurux badan, Tayada Superve iyo Rakibaadda esy
Badeecadani waxay lahayd muuqaal gaar ah marka lagu daro inay tahay hal gacan qabasho, waana sababta aan u iibsaday. Aad ayaan ugu qanacsanahay tayada iyo dhamaadka sheyga waana ku faraxsanahay iibsashadayda.
Waxaan tan u soo iibsaday si aan u beddelo 2-xamil, 3-god oo ku yaal musqusha. In kasta oo daloolka dhexe ee ku yaal wax aan waxba tarayn uu aad u yaraa oo loo baahan yahay in la soo saaro si loogu daboolo qasabaddan cusub, weelka wejiga ee ay ku jirto qasabadani wuxuu daboolay 3 dalool.
Tuubadaani waxay isticmaashaa tayo, bir bir ah oo casri ah iyo qalab naxaas ah. Dhexdhexaadinta xaruntu waxay leedahay giraan naxaas ah si loogu xidho tuubada wax aan waxba tarayn iyo 2 xabo oo labada dhinac ee giraanta ah si loo hubiyo isku-xidhnaanta. Tani waxay umuuqataa sida qasabadaha fiican ay u rakibayaan maalmahan, taas oo aan ku qanacsanahay marka la eego sida ay u adag tahay in lagu gaadho isku dheelitirnaan sax ah meelaha cidhiidhiga ah iyada oo aan lahayn 2 boolal.
Qaybta bullaacaddu si sax ah uma fuulayso saxankayga, laakiin waxaan jecelahay inay tahay god-riix-xirid halkii aad ka heli lahayd baarka aad jiido. Kala duwanaanta bullaacadaha bullaacadaha iyo saxanka cad waa fiican yahay. Dadka qaarkiis ayaa laga yaabaa inay ka welwelsan yihiin in qashinku yahay caag, sidaa darteed taasi waa xusid mudan. Waa inaan arkaa sida ay u taagantahay waqtiga.
Waxaa xusid mudan in aan horay u sameeyay tuubbooyinkan fudud. Anigu waxaan ahay DIY'er waxtar leh, laakiin sinaba uma ihi khibrad tuubiste. Qalabka iyo agabyada aan isticmaalay waxaa ka mid ahaa bambaano, qufulada kanaalka, bareelaha, baaldi, tuwaal, plumbers putty, teflon tape, Rigid EZ Change tubbada tool (iyo 1 1/2 saw god saw + + qoditaanka si wax looga beddelo wax aan jirin).
Aad ayaan ula dhacay tuubada. Si wanaagsan ayaa loo dhisay, waa culus yahay, wuxuu umuuqdaa mid aad u fiican oo sifiican ayuu u shaqeeyaa. Rakiibintu waxay ahayd neecaw, laakiin khadadka saadka ayaa yara yaraa. Walwal ma leh. Soo saaraha xitaa wuxuu keenay cajalad Teflon ah. Waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa inay sidan yeelato waxay ahayd nooc ka mid ah balaastiig caag ah oo ku hoos jira saxanka korkiisa si markaa loo adkeyn karo wax yar. Waan hubaa inaan wax uun moodo. Isku soo wada duuboo, tani waa hal meel oo qasabad ah.
Sida kuwa kale tilmaameen, adkeynta qasabada ayaa leh u janjeedha saxanka sagxadda. Xalkeyga tan ayaa ahaa in la isticmaalo o-ring-yada ku wareegsan gacanta dunta leh ee tuubbooyinku maraan. O-ring-yadu waa inay ahaadaan kuwo weyn oo ku habboon hareeraha gacantan laakiin weli yar oo ku filan oo ku habboon saxanka sagxadda. Waxaan is dul saaray dhowr ka mid ah kuwan si dhererka xarragoonku waxyar uga dheeraado dhererka saxanka dusha sare. O-ring-yadu waxay leeyihiin gunno dheeraad ah taas oo ka caawinaysa xarunta qasabadda iyo saxanka sagxadda. Qaabkan, waxaan awooday inaan hoos u adkeeyo tuubada si aysan u dhaqaaqin saxankuna uusan u foorarsan.
Gabi ahaanba waan jeclahay qasabadaan. Waa xariiqyo xarrago leh oo fudeydku waa wacdaro. Sifiican baa loo sameeyay, sinaba uma qiimo jaban. Dhammaan qaybaha si fudud ayaa loo aqoonsan karaa waxayna ahayd mid aad u fudud in la rakibo. Anigu ma ihi tuubiste oo waxaan leeyahay khibrad yar, waxaan jeclahay inaan tijaabiyo waxyaabo cusub runtiina waan awooday inaan isku duba rido oo aan ku shaqeeyo saacad gudaheed.
Qulqulka ayaa ku dhow laminar wuxuuna soo saari karaa tan biyo ah haddii aad u ogolaato.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan tan ku haysto qubeyska martida oo durba la i ammaanay!
Waa qiime aan la rumaysan karin. Waxaan isbarbar dhigay qaar kamid ah qasabadaha tuuraya 2 ama 3 jeer wax kabadan mana isbarbar dhigaan. Waxani waa bir adag oo bir ah! Dareenku waa tayo saafi ah. Waxaan ahay nin da 'dhexaad ah. Uma maleynayo inaan ku farxi doono wax ku saabsan musqusha laakiin waan jeclahay!
Waxaan tan ku rakibay qolka musqusha ee qadiimiga ah ee 60meeyadda oo wali leh qalabkii asalka. Waxay ahayd inaan ballaadhiyo daloolka dhexe anigoo shiidaya. Waxaan sidoo kale ku khasbanaaday inaan sidaas oo kale u sameeyo bulaacada. Ma aanan isticmaalin bulaacada la socota, waxaan iibsaday shaqo adag oo bir ah. Tani waxay bedeshay musqushayda waxayna siisay dareen kacsan, xitaa haddii ay tahay kaliya inaan gacmahayga dhaqo, oo aan dhammaanteen qabanaynay beryahan dambe.
Wowow tubbada waa mid aad u tayo sareysa naqshaduna waa mid aad u qurux badan qiimaha. Dhamaadka nikkelku wuxuu leeyahay muuqaal satin oo fiican waana fududahay in nadaafadda la ilaaliyo oo bilaash la helo Xakamaynta gacanta ee fudud waa mid sahlan oo dareen leh in la isticmaalo. Waxay ku timaaddaa saxan dabool haddii loo baahdo in laga beddelo saddex god oo loo beddelo mid, laakiin waxaan toos ugu dhejiyay iyada oo aan lahayn saxan dusha sare ee daloolka dusha. Way fududahay in la rakibo, laakiin la soco in khadadka quudintu ay ku saabsan yihiin oo kaliya cag dherer ah oo aad u baahan karto siyaado dheeraad ah oo khad biyo ah si loo gaadho qalabkaaga wax lagu xidho. Tani waa shey xarrago leh oo qiimo weyn ugu fadhiya qiimaha.
Xaqiiqdii cajiib! Tuubisteena ayaa na weydiisay meesha aan ka helnay qasabada maxaa yeelay tayadaas aad ayeey u fiicneyd wuxuuna doonayay inuu isagu helo mid. Waxaan aad ugu talin lahaa. Isku soo wada duuboo, waa wax aad u qurux badan.
Aad ayaan ugu qanacsanahay tubbada! Naqshadayntu waa mid fudud oo xarrago leh, taas oo ka dhigaysa musqusha mid qurux badan! Faa'iidada ugu weyn ayaa ah in rakibidda ay tahay mid aad u fudud! Si aan daacad u ahaado, waxaan u maleynayaa inay qaadaneyso waqti in lagu rakibo, laakiin tilmaamaha waa cad yihiin waana sahlan yihiin in la fahmo. Aad baan ugu ammaanayaa muuqaalka qasabaddaan. Waxaan ku lahaan jiray qasabad heer sare ah oo Mareykan ah musqusha dabaqa, laakiin runtii uma muuqan mid aad u wanaagsan. Waan jeclahay muuqaalka qasabadani, waana jeclahay daaweynta dusha sare!
10 ka mid ah 10! Iibsaday SADDEX oo gabi ahaanba jecel iyaga! Tayo aad u wanaagsan oo qiimaha waa xatooyo.
Tuubada ayaa waxyar ka dhumuc weyn ama ka culus sidaan jeclaan lahaa!
Waan jeclahay qaabka iyo sida qasabadu u shaqeyso, qalab wanaagsan. Mid aad u fiican
Qasabadda suuliga ee ugu horreysa abid baan iibsaday! Waa layaab! Si fiican loo sameeyay oo xoog badan! Sleek iyo joogsadaha saxanka ku jira ayaa fiican. Aad baan u jeclahay!
Waxaan hayaa xarun tijaabo oo loo diyaariyey inay dib u eegto qasabadaha.
Waxaan isku dayi doonaa inaan wax u burburiyo sida ugu fiican ee aan awoodo dhanka tayada wax soo saarka iyo kakanaanta rakibaadda.
Qiyaasta 1-10, waxaan dhihi lahaa qasabadani waa 7/10 illaa inta ay ku adag tahay rakibidda.
Maskaxda ku hay in ay ku kala duwanaan karto sida saxankaaga iyo golahaaga loo qaabeeyey.
Tuubadaani gaarka ah waa tayo fiican.
Dhamaadka madow ayaa u muuqda mid wanaagsan. Guud ahaan qasabadani waxay umuuqataa mid waara. Waxaan jeclahay in dhammeystirka uusan ku sii wasakheynin sababtoo ah muuqaalka muuqaalka. Uma baahnid in loo tirtiro sidii xilli ahaan sidii chrome si loo ilaaliyo iftiinka.
Hal gacan ayaa ka dhigaysa mid fudud in la doorto heerkulka biyaha. Waalka isku dhafan wuxuu u shaqeeyaa sifiican, sida ay ahayd.
Tuubadaani way fududahay in la shaqeeyo oo waxay u dhaqaaqdaa si habsami leh iyada oo aan wax dhibaato ahi ka jirin.
Xaqiiqda ah inay tahay wareeg 360 wareeg ah oo iswaafajinaysa waa lagu daray tan iyo intaad ku dhajin karto sikastoo aad rabto walina way u dhaqaaqi doontaa meeshaad rabto. Sidoo kale wuxuu la yimaadaa saxanka sagxadda. Waad dabooli kartaa godadkaas aan la adeegsan ee saxankaaga.
Waxaad awood u leedahay inaad madaxa hoos u dhigto, taas oo xaqiiqdii lagu daro sidoo kale. Habab badan oo buufin ah oo aan jeclayn qasabadaha kale ee soo jiida. Saldhiga meesha uu madaxa ka soo baxo ayaa si wanaagsan loo qaabeeyey si uusan u baabi'in tuubada waqtiga aad isticmaalayso.
Naqshad qurux badan oo ay weheliso taam ahaansho iyo dhammeystir ayaa tan ka dhigaya haddii qasabadaha ugu fiican weligood. Way adag tahay in lagu sheego sawirrada laakiin tuubada ayaa leh naqshad u gaar ah oo ku darsanta qallooc yar oo ku fiiqan, kana dhigaysa ku dhowaad gabal farshaxan. Waa dhisme adag oo culus. Xakamaynta off set dhab ahaantii waa la yaab leh sidoo kale. Toosan oo toos ah Si fudud loo rakibo xitaa waxay la yimaadaan gacmo gashi. Ma awoodo inaan ku xisaabtamo!
Rakibaadda waa fududahay dhammaan qalabka iyo la keenay, qalabku wuxuu u muuqdaa mid si wanaagsan loo dhisay oo tayo wanaagsan leh. Tuubada layga keenay iyo isku xirayaasha ayaa sifiican u badalay qasabaddii hore. Biyuhu si habsami leh ayey ugu socdaan oo si wanaagsan ayey ugu jawaabaan hal-hayaha keliya iyo shanqarta yar mana laha wax saameyn ah sida ay qasabadaydii hore u shubmayso. Naqshadayntu waa mid xarrago leh oo musqusha hore ka dhigaysa mid cusub oo casri ah. Cilladda keliya ayaa ka imaaneysa iyadoo la raacayo qalab bullaacadeed oo soo baxa waana inaan gacanta ku dhigaa qalabkeygii hore. Isku soo wada duuboo, tayo wanaagsan iyo muuqaal qurxoon oo ay tahay in ay sii socoto sanado badan, dib ayaan u cusbooneysiin doonaa mustaqbalka haddii arin kasta ay timaado.
Kani waa qasabada ugu quruxda badan ee aan arko. Waxay leedahay qaab aad u tiro badan oo aad u culus. Si aad u wanaagsan ayaa loo sameeyay oo aad ayuu u shaqeeyaa sidoo kale. Waxay ahayd rakibid fudud. Miyaad tan kula talin lahayd qof kasta oo raba qasab adag oo casri ah.
Waxaan tan u soo iibsaday si aan u hagaajiyo qasabadda musqusha ee aan gaboobay. Waxaan ka walwalayay heerka dhibka ee ku rakibida tuubada cusub. Si kastaba ha noqotee, xirmada ayaa la timid buug ku saabsan sida loo rakibo. Qeybtii adkayd waxay dib u habayn ku samaysay tuubooyinkaygii hore ee musqusha. Laakiin ma ahayn wax aad u xun in la ogaado. In kasta oo waqtiga rakibaadda ay in ka badan 1hr ii tahay sidii hore oo aanan weligay qaban wax shaqo ah oo tuubbo ah. Waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay inay la timid balastar salka madaama qasabadayda hada ay leedahay 3 god oo laga qoday dusha sare ee granite sidaa darteed waxaan awooday inaan isticmaalo saxanka si aan ugu daboolo 2 dalool oo qasabadani aysan ubaahnayn Sidoo kale haysashada gacan labaad ayaa noqon doonta mid si aad ah waxtar u leh inkasta oo aan keligey rakibay laakiin taasi waxay kordhisay heerka adag.
Waxa kaliya ee aan isticmaalay waxay ahaayeen 11mm wrentch si aan ugu xirto tuubada tubada gurigeyga tubada (khad kulul iyo qabow), darawal wadayaal ah si uu u xiro tubbada dhagxaanta gunta hoose iyo xajin si loo badalo daboolka bulaacada
Xirmada waxay la timid galoofis si looga hortago in faraha faraha lagaliyo dhamaantiis laakiin ma aanan isticmaalin.
Illaa iyo hadda, waan istcimaalaa qofkasta oo guriga joogaana wuxuu jecelyahay sida ay u muuqato qasabada cusub. Xaqiiqdii waxaan ka iibsan doonaa qasabado badan dukaankan anigoo eegaya inaan casriyeeyo qasabadaha kale ee guriga ku wareegsan.
Waxay umuuqataa mid wanaagsan. Waxoogaa weyn oo musqusha yar ah. Mitirada dhadhanka.
Hagaajin aad u fiican oo saxanka musqusha ah. Tayo wanaagsan.